राति कामुक सपना आयो भने नआत्तिनुस्...... - sambahak
Home जीवन शैली राति कामुक सपना आयो भने नआत्तिनुस्……
राति कामुक सपना आयो भने नआत्तिनुस्……
किन आउँछ सेक्सी सपना ?
केही मान्छे सेक्सका बारेमा हरदम सोचिरहेका हुन्छन् । सेक्स गर्ने हिम्मत नभएका यस्ता मान्छेले मनमा कुरा दबाएर बसिरहेका हुन्छन् । युवाहरूलाई सेक्सको सपना आउनु आश्चर्यको कुरा हैन तर बुढाबुढीलाई समेत यस्तो सपना आउन सक्छ । सेक्सको सपना उमेर बढ्दै जाँदा झन् झन् आउँछ । अत्यधिक रचनतात्मक मान्छेलाई पनि सेक्सको सपना आउँछ ।
कहिलेकाहीँ हाम्रो सपनामा एलियन आउँछन् र हामी उनीहरूसँग क्रीडा गर्छौं । हैन हामीले के गरेको यो जस्तो पनि लाग्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार सेक्समा रोमाञ्चको चाहना गर्नेहरू यस्तो सपना देख्छन् । सपना जस्तो भएपनि सपना नै हो । तपाईं आफ्नो सेक्स लाइफको आनन्द उठाउनुहुन्छ भने वास्तविक संसारमा आउनुस् । सपनामा मात्र रमाएर के गर्नु ?
Previous articleरन्जीब श्रेष्ठको अध्यक्षतामा धुलिखेलमा सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन महासंघ
Next articleभक्तपुरको नागरिक अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि दिनभर तनाव